sosegado : သိပ် မုန်းဖို့ကောင်းတဲ့ မိန်းမ
Posted by sosegado at 7/16/2013 01:09:00 PM
အမုန်းသည် မနှစ်မြို့သော အကြည့်က စတင်ခဲ့ခြင်းလို့ ဆိုနိုင်ပါသည်။
မြင့်သောဒေါက်မြင့်ဘိနပ်ကို အမြဲလိုလို စီးတတ်သော မိန်းမများသည် ကိုယ်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု မရှိသော မိန်းမများ ဖြစ်သည်
တို့ဇတ်လမ်းဆက်ရေးရမယ်ဆိုရင်. အဲသည်မိန်းမဟာ ချစ်သူထွက်သွားအပြီးမှာ ကောင်လေးရဲ့အိမ်ခန်းထဲိကိုဝင်လာပြီး အဲသည်လိုအထင်လွဲစရာဇတ်လမ်းကို ဖန်တည်းခဲ့တာဘဲ တို့သာကောင်လေးရည်းစားဆိုရင် သောက်ဂရုမစိုက်ဘူး. ကိုယ့်လူကိုဘဲ ကိုယ်ယူမှာဘဲ မှားခဲ့ရင်တောင် တစ်ခါမှားခဲ့တာ မူးလို့မှာခဲး့တာခွင့်လွတ်မယ် ပိုထင်တာကတော့ဟိုမိန်မးက လုပ်ကြံခဲ့တာဘဲ. ။ ဂျုးထဲကလိုပေါ့ကျိန် မကို သူတွန်းချခဲ့တာပါလို့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ခုနချပြီးကောင်လေးကို ဒုတ်ခပေးခဲ့တာမျိုး.
ဒါပေမယ့်ဒီလိုအခြေနေမျိုးရောက်အောင် အသေးစိတ်ဖန်တီးယူနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို innocent လေးပါလို့ မမြင်နိုင်တော့တာ နောက်ဆုံးပိုင်းမှာပါ...
ကိုယ်တစ်ကယ်ချစ်တဲ့ယောက်ျားဆိုဘယ်သူမဆိုကာကွယ်ကြမှာပါဘဲ.. ကျေးဇူးရှင်မို့ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကြောင်နေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကို အခွင့်ရေးပေးရအောင် အဲဒီချစ်သူက အရုပ်တစ်ရုပ် အကောင်တစ်ကောင်လောက်ဘဲ တန်ဖိုးရှိပါသလား လို့တွေးမိပါတယ်။။။။
ထင်တာတွေ မပြောတော့ပါဘူး ... ဆက်ရန်လေးကို သာမျှော်နေပါတယ် ကိုဆိုစီရေ ... ကိုကြီးကျောက် ကို လွမ်းလိုက်တာ
အဖြစ်မှန်ကို မပြောပဲ လမ်းခွဲသွားတဲ့ ချစ်သူကို နားမလည်နိုင်ဘူး...။
စလုံးလို နေရာမှာ လေးငါးနှစ်ကြာ နေပီးမှတော့ ဒီ့ထက်မက ပွင့်လင်းသင့်တယ် ထင်တာပဲ..။
မြင်မြင်ချင်းချစ်တယ် မြင်မြင်ချင်းမုန်းတယ်ဆိုတာ အတိတ်ဘ၀ရဲ့အကျိုးဆက်ပဲထင်တယ် ဆိုစီရေ...
သံသယဆိုတာခိုင်မြဲစွာနှောင်ဖွဲထားတဲ့ မိသားစု အ၀န်းကိုတောင် တခဏအတွင်းဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။
မုန်းစရာကောင်းလိုက်တဲ့ မိန်မပဲ... သူ့ ကို မုန်းမှန်း သိလို့တမင် အကွက်ချပြီး လုပ်သွားတယ် လို့ယူဆမိတယ်... ဖတ်ပြီး အမုန်းစိတ်တချို့ဝင်နေမိတယ်... အကုသိုလ်ဖက်ကို မရောက်ခင်မှာ မြန်မြန်ဖြတ်လိုက်ရတယ်... နောက်တပိုင်း မျှော်နေမယ်နော်... :-)
မနေ့ထဲက ဖတ်နေတာ။ ဒီနေ့တစ်ခါ ထပ်ဖတ်တယ်။ ကိုကြီးကျောက်ပါပါလာတော့ True Storyလားဟု ထင်မိသွားတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြင့် ဖတ်သူကို ဆွဲခေါ်သွားလိုက်တာ။ မုန်းသူရဲ့အကြောင်းကို ပေါ်လွင်အောင် ပုံဖော်ထားတာလဲ သဘောကျမိတယ်။ ဒုတိယပိုင်းကို ဖတ်ချင်နေမိပြီ။
အရေးအသား ညက်ညောတာကတော့ ကိုစိုစီရဲ့ ပင်ကိုဟန်ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ရဲ့...အမုန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အနက်ဖွင့်ထားတာတွေကို တစိမ့်စိမ့် ဖတ်ဖြစ်တယ်...ဖတ်လိုက်တွေးလိုက်နဲ့ အရသာအတော်ရှိတာကလား...မုန်းတဲ့မိန်းမအကြောင်း ဖတ်ရင်းနဲ့လည်း တွေးနေမိသေးတယ်...မိန်းမတွေရဲ့ အနံ့တွေအကြောင်းပေါ့...မဒမ်ဟန်ကြည်မှာရော သွေးဆေးနံ့ရသလားဆိုတာ အခုထိသတိမထားမိတာကတော့ ကိုယ်ညံ့လို့ပဲ ထင်ပါရဲ့...
ဇာတ်လမ်းကို ဘယ်လိုဆက်ရမလဲလို့ စဉ်းစားတယ်...ဟိုအမျိုးသမီးသာ အိမ်ထောင်မကျသေးရင် အတော်ခက်မယ့်ဇာတ်လမ်း...အခုတော့ တစ်ဘက်ပဲ ရှင်းစရာရှိတာမို့ ဒုတိယပိုင်းကို ထင်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မဖြစ် စောင့်ဖတ်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ...
ကျနော်တစ်ယောက်များ သိပ် မုန်းဖို့ကောင်းတဲ့ မိန်းမနဲ့ ပေါင်းသင်းနေပြီထင်တယ် ဆက်ပါဦး